पाथिभरा माताले हामी सबैको रक्षा गरुन,भोलि पुष २९ गते बुधबार , कस्तो रहला तपाईको दिन? हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल! – " कञ्चनजंगा News "
पाथिभरा माताले हामी सबैको रक्षा गरुन,भोलि पुष २९ गते बुधबार , कस्तो रहला तपाईको दिन? हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल!
No Comments on पाथिभरा माताले हामी सबैको रक्षा गरुन,भोलि पुष २९ गते बुधबार , कस्तो रहला तपाईको दिन? हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल!
कुनै प्रकारको संकटमा नपर्नुहोला। व्यवसायिक स्थलमा उच्च अधिकारीसँग कार्य सम्पन्न हुनेछ।उग्र चर्चामा नाउत्रिनुहोला। भाग्यले साथ दिनेछैन। कार्यमा सफलता सजिलै मिल्नेछैन। मध्यान्नपछि परिस्थितिमा सुधार आउनेछ। गृहस्थजीवनमा आनन्दपूर्ण वातावरण रहनेछ। उच्च अधिकारीको प्रसन्नता तपाईमा रहनेछ। पदोन्नति हुने सम्भावना रहेको छ। आर्थिक योजनानुसार आर्थिक लाभ पनि मिल्नेछ।
अधिक भावुकताले तपाईलाई अस्वस्थ बनाउनेछ। शारीरिक स्वास्थ्यमा पनि यसको नकारात्मक असर पर्न सक्छ। नयाँ कार्य प्रारम्भ नागार्नुहोला। बोलि र व्यवहारमा ध्यान दिनुहोला। खान-पानमा ध्यान राख्नुहोला। व्यवसायिक क्षेत्रमा विध्न उपस्थित हान सक्छ। उच्च अधिकारीसँग घर्षणको प्रसंग रहनेछ।
मनोरंजन प्रवृत्तिमा तपाई हराउनुहुन्छ। मित्रसँग प्रवास- पर्यटनको आयोजन हुनेछ। राम्रो खान-पान र वस्त्रालंकार उपलब्ध हुनेछ। मध्यान्नपछि केहि अधिक भावुक रहनुहुनेछ। पैसा खर्च हुनेछ। अनैतिक तथा निषेधात्मक कार्यबाट टाढा रहनुहोला। प्रभुको भक्ति र यौगिक ध्यानबाट मनशान्त रहनेछ।
व्यवसायिक स्थलमा वातावरण अनुकूल रहनेछ। पारिवारिक वातावरण पनि अनुकूल रहनेछ। शारीरिक र मानसिक रूपले तपाई स्वस्थ रहनुहुनेछ। बौद्धिक चर्चामा आफ्नो तार्किक विचार प्रदानको लागी समय अनुकुल रहेको छ। सामाजिक रूपले सम्मान प्राप्त हुनेछ।
प्रणय- प्रसंगको लागि दिन अनुकूल रहेको छ। क्रोधमा ध्यान राख्नुहोला। पेट सम्बन्धित रोगबाट शारीरिक कष्ट हुन सक्छ। मध्यान्नपछि परिवारमा आनन्द र उल्लासमय वातावरण रहनेछ। मानसिक रूपले प्रसन्न र स्फूर्तिको अनुभव गर्नुहुनेछ । व्यवसायमा लाभ होला।
शारीरिक स्फूर्ति तथा मानसिक उल्लासित र चेतनाशक्तिको तपाईमा अभाव रहनेछ। सामाजिक रूपले अपमान नहोस यस कुराको ध्यान राख्नुहोला। धनहानि होला। कार्य सफलता नमिल्नुको कारण निराशा रहनेछ। सन्तानको विषयको चिन्ताले सताउनेछ।
शुभारंभ गर्नको लागि दिन राम्रो रहेको छ। प्रिय व्यक्तिसँग भेट आनन्ददायी रहनेछ । भाग्यवृद्धि हुनेछ । सामाजिक रुपले मान-सम्मान प्राप्त हुनेछ। मध्यान्नपछि तपाईको मनमा उदासी छाईरहनेछ। शारीरिक रूपले अस्वस्थताको अनुभव हुनेछ। पारिवारिक वातावरण क्लेशमय रहनेछ ।
निर्धारित कार्य सम्पन्न नहुनुको कारण निराशा अनुभव गर्नुहुनेछ। कुनै पनि महत्वपूर्ण कार्य अथवा त्यस विषयमा निर्णय नलिनुहोला। पारिवारिक वातावरणमा क्लेशको मात्रा अधिक रहनेछ। मध्यान्नपछि परिवार तथा भाई-बहिनीसँग आनन्दपुर्वक समय बिताउनुहुनेछ। प्रतिस्पर्धीलाई पराजित गर्नुहुनेछ । शारीरिक र मानसिक रूपबाट स्वस्थ रहन पाउनुहुनेछ।
तपाईको लागि दिन शुभ फलदायी रहेको छ। शारीरिक र मानसिक रूपबाट उत्साही तथा प्रफुल्लित रहनुहुनेछ ,त्यसैले प्रत्येक कार्य गर्न तपाईलाई उत्साह रहनेछ। मध्यान्नपछि केहि द्विधामा रहनेछ। घरमा तथा व्यवसायिक स्थलमा कार्यभार रहनेछ । अधिक खर्च वा निरर्थक खर्च हुन सक्छ।
बोलि र व्यवहारको कारण अशान्ति नहोस यस कुराको ध्यान राख्नुहोला। क्रोध को मात्र बढ्नेछ। मनमा व्यग्रता रहनेछ। आध्यात्मिकताको आश्रय लिनले मन शान्त हुनेछ। मध्यान्नपछि स्फूर्ति र उल्लासको अनुभव गर्नुहुनेछ। पारिवारिक वातावरण आनन्ददायक रहनेछ। शुभ प्रसंगमा जाने अवसर प्राप्त गर्नुहुनेछ।
सामाजिक क्षेत्रमा तपाई अधिक सक्रिय रहनुहुनेछ र फलस्वरुप मान प्रतिष्ठा वृद्धि हुनेछ । विवाहोत्सुकलाई अनुकुल जीवनसाथी मिल्नाले दिन अभिवृद्धि हुनेछ । मध्यान्नपछि घरको वातावरण कलुषित हुनेछ । शारीरिक स्वास्थ्य बिग्रिन सक्ला। त्यसैले आवेशपूर्ण मनको ध्यान राख्नुहोला।
कुनै परोपकारको कार्य तपाईद्वारा हुनेछ। व्यापारमा उचित आयोजनद्वारा व्यापार- वृद्धि गर्नुहुनेछ। उच्च अधिकारीगणले तपाईको कार्यको प्रशंसा आनन्दपूर्वक गर्नेछ। व्यापारसम्बन्धित प्रवासको योग रहेको छ। आयमा होला ।
← २० वर्ष पहिले यस्ती देखिन्थिन् प्रियंका, तस्विर भयो भाइरल !के छ आखिर तस्विरमा ? [ हेर्नुहोस् तस्विर सहित] → ३ वर्षपछि रियादमा उ’त्रियो कतारको ध्वजाबाहक विमान